क्लासिक टेकले ल्यायो नेपालमै पहिलो पटक उच्चगतिको १०० एमबिपिएस ईन्टरनेट « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
क्लासिक टेकले ल्यायो नेपालमै पहिलो पटक उच्चगतिको १०० एमबिपिएस ईन्टरनेट
काठमाडौं । गुणस्तर र भरपर्दो ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ बिगत ८ बर्ष देखि नेपालको ७२ जिल्लामा फैलिएको क्लासिक टेकले नेपालमै पहिलो पटक उच्चगतिको १०० एमबिपिएस अनलिमिटेड ईन्टरनेट सेवा शुरु गरेको छ ।
विश्वकै उत्कृष्ट जिपिओएन प्रविधिमा आधारित ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीले छोटो समयमा ग्राहकको मन जित्न सफल भएको छ । कम्पनीले सेवाग्राहिको र समयको मागलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमै पहिलो पटक उच्चगतिको १०० एमबिपिएस अनलिमिटेड ईन्टरनेट सुपथ मुल्यमा ल्याएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
यसका साथै ६ एमबिपिएस अनलिमिटेड ईन्टरनेट मात्र रु १०९९ प्रतिमहिनाको दरमा र १५ एमबिपिएस अनलिमिटेड ईन्टरनेट रु १२९९ प्रतिमहिनाको दरमा ल्याएको होे । अफर अवधिभर जडान र फाईवर डिभाईस निशुल्क हुने कम्पनीले जनाएको छ । थप जानकारी क्लासिक टेकको वेबसाइट www.classic.com.np मार्फत लिन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७४ साउन २४
गत साताको भन्दा ३८.४६ प्रतिशतले बढेको यस साताको सेयर कारोबार चार अर्ब नाघ्यो
काठमाडौ । सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा यस साता १०८.१६ अंकको सुधार आउँदा कारोबार रकम गत
नगर प्रमूखमाथि आक्रमण
भक्तपुर । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठमाथि दुईजनाले आज सांघातिक आक्रमण गरेका छन् ।
दुर्घटनामा तीनको मृत्यु, १६ घाइते
डोटी । डोटीको शिखर नगरपालिका–३ आली गाउँमा आज दिउँसो यात्रु बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम जेठ १ देखि शुरु हुने
काठमाडौं । रानीपोखरी पुनःनिर्माणका क्रममा प्रयोग भएका आधुनिक निर्माण सामग्री यही वैशाख मसान्तसम्ममा निकाली आगामी
इन्स्योरेन्सको ७५ करोडको आईपिओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाद्वारा पारित
लुम्बिनी बैंकको ६ लाख कित्ता सेयर लिलामी भर्ने आइतबार अन्तिम…
यस्तो छ, कालीमाटी तरकारी बजारको आजको तरकारीको होलसेल मूल्य
के हो पिनास, कसरी गर्ने उपचार ?
बैंकको ६ लाख कित्ता सेयर लिलामी, थाहा पाउनुहोस् कहाँवाट दिने…
गर्भावस्थामा सम्भोग कति उत्तम ? भिडियो सहित
पिनासलाई रोग भनिन्छ तर पिनास रोग नभएर एक प्रकारको सङ्क्रमण हो । नाकको पछाडि छेउ–छेउमा